कोरोनाकै कारण एकै घरका बुवा, आमा र छोरा गरि ३ जनाको मृ’त्यु , बु’हारीको अ’वस्था पनि गम्भी’र ! – Dailny NpNews
सोमबार २० आषाढ २०७९
कोरोनाकै कारण एकै घरका बुवा, आमा र छोरा गरि ३ जनाको मृ’त्यु , बु’हारीको अ’वस्था पनि गम्भी’र !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १४, २०७८ समय: १४:४८:५९
दोश्रो लहरको कोरोना भाइरसको संक्रमण निकै नै बढीरहेको छ।भर्खरै मात्र रुपन्देहीमाको’रोनाभाइरसको संक्रमणबाट एकैघरका ३ जनाको मृ’त्यु भएको छ । मृ’त्यु हुनेहरुमा बुटवल उपमहानगरपालिका –१० कालिकानगरमा रहेका बुवा, आमा र छोरा रहेका छन्।
त्यहाँका स्थानीय वडाध्यक्ष पदमबहादुर थापाका अनुसार एक हप्ताको अन्तरालमा ६९ वर्षिय पुरुष, उनका ५९ वर्षीया श्रीमती र ३९ वर्षका छोराको को’रोना संक्रमणबाट मृ’त्यु भएको हो । बाबु छोराको उपचारका क्रममा भैरहवाको यु’निभर्सल कलेज अफ मे’डिकल साइन्सेजमा मृ’त्यु भएको हो भने आमाको होम आ’इसोलेशनमा मृ’त्यु भएको जनाइएको छ ।
यही जेठ ५ गते आमा, जेठ ७ गते छोरा र जेठ १२ गते बुवाको मृ’त्यु भएको हो । यस्तै उक्त घरकी बु’हारीलाई पनि को’रोना संक्रमण देखिएको छ । उनलाई बुटवलको ए’न्फा टे’क्निकल सेन्टरको आ’इसोलेशनमा राखिएको जनाइएको छ ।
यता गतवर्ष को’रोना संक्रमित भएका गायक प्रमोद खरेललाई यसपटक पनि को’रोनाले छोडेन ।एक महिना अगाडि मात्र को’रोनाको पहिलो डो’ज खोप लगाएका उनमा अब को’रोना संक्रमण नहोला भन्नेमा ढु’क्क थियो । तर त्यसो भइदिएन ।उनले बिहीबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै बिहीबारदेखि आ’इसोलेसनबाट मु’क्त भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘को’रोनाले आठ महिनाको अन्तरमा दुईचोटी आ’क्र’म’ण गर्यो ।पहिलो डो’ज भ्या’क्सिन पनि लगाएकै थियो । तर पनि आएरै छो’ड्यो । र आइसोलेसनबाट आज मु’क्त भ’इयो’, उनले लेखेका छन् ।प्रमोदले खोप लगाए पनि स’चेत रहन आग्रह गरेका छन् । ‘पहिला ला’गेको र खो’प लगाए पनि स’चेत रहौं, सु’रक्षित रहौं’, उनले लेखेका छन् ।
४४८ पटक हेरिएको